Kuunza mota kubva kuSouth Africa kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Uri kutarisa kuendesa mota yako yekuSouth Africa kuUnited Kingdom?
Tinogona kubata maitiro ese ekupinza mota yako kubva kuSouth Africa, kusanganisira iyo clearance yemapurisa, kutumira, clearance tsika, UK inland trucking, kuteedzera kuteedzera uye DVLA kunyoreswa. Isu tinobata maitiro ese, tichikuchengetera iwe nguva, dzichikunetsa uye zvisingafanoonekwe mitengo.
Kuendesa uye kupinza mota kubva kuSouth Africa kazhinji kunonyanya kudhura. Tine huwandu hukuru hwekupinza zvichireva kuti iwe unogona kubatsirwa kubva kune akagovaniswa makontena mitengo yekutakura. Makotesheni edu akabatanidzwa zvizere uye anoenderana nezvamunoda kupinza mota kubva kuSouth Africa kuenda kuUK. Iwe unogona kuziva zvakawanda nezve nzira yekuunza mota yako kubva kuSouth Africa pane ino peji, asi usazeze kupinda mukutaurirana uye kutaura nemumwe wevashandi.
Isu tinotakura mota yako kubva kuCape Town uye tinogona kuronga mukati megungwa marori kuenda kuchiteshi chemakwikwi zvakanyanya. Isu tinoshanda kubva kuKapa nekuda kwehukama hwakanaka nevatendi vakavimbika uye vane ruzivo vanotakura mota vachishandisa midziyo yakagovaniswa, zvichireva kuti iwe unobatsirwa kubva pamutengo wakadzikiswa wekufambisa mota yako kuenda kuUK nekuda kwekugovana mutengo wemudziyo nedzimwe mota isu tiri kuunza kunze kwevamwe vedu vatengi. Midziyo yekutakura inzira yakachengeteka uye yakachengeteka yekupinza mota yako kuUK uye kazhinji ndiyo inodhura kwazvo.
Pakununura mota kubva kuSouth Africa, pane nzira ina dzakasiyana dzekubvisa tsika muUK, zvinoenderana nekwakatangira mota, zera uye mamiriro ako:
Kana iwe uri kuenda kuUK, wakagara muSouth Africa kwemwedzi gumi nemaviri kana kupfuura, uye uine mota kwemwedzi mitanhatu kana kudarika, unogona kuendesa kunze-kusabhadhara mutero pasi pechirongwa cheToR.
Kune mota dziri pasi pemakore gumi kubva kuSouth Africa, kamwe panzvimbo yedu, mota yako inoda kutevedzera zviyero zveUK. Isu tinoita izvi bu tichiitisa IVA bvunzo pamota yako. Isu tine yega yega inoshanda nzira yekuyedza yeIVA munyika, zvakanyanya kucheka nguva dzekumirira zvichienzaniswa nekuenda kunzvimbo dzekuyedza dzehurumende dzinoshandiswa nevatinokwikwidza.
Motokari yega yega yakasiyana uye mugadziri wega wega ane akasiyana magadzirirwo, saka ndokumbirawo utore chitauro kubva kwatiri kuti tikwanise kukurukura nezvekumhanyisa kumhanya uye sarudzo dzemitengo yemota yako wega.
Isu tinogadzirisa maitiro ese eIVA ekuyedza pachinzvimbo chako, kunyangwe izvo zviri kubata nechikwata chevakadzidzisa chemugadziri wemotokari yako kana Dhipatimendi reZvekutakura, kuti iwe ugone kuzorora mune ruzivo rwekuti iwe uchanyoreswa zviri pamutemo neDVLA munguva pfupi zvinogoneka.
South Africa ingangoda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira kushandura iyo yekumhanyisa kuita MPH uye yekumashure mhute mwenje kumisikidza kana isati yatenderana pasi rese.
Tine ruzivo rwakazara rwezvinodiwa pane yega yega kugadzira uye modhi, saka ndokumbirawo utore chitauro kwatiri kuti tipe fungidziro chaiyo yezvinodiwa kuti tigadzirire migwagwa yeUK.
Vanopfuura gumi-makore-makore mota vane mhando mvumo isingabhadharwe, asi zvichiri kuda MOT bvunzo uye zvakafanana kugadziridzwa kune IVA bvunzo isati yanyoreswa. Izvo zvinogadziriswa zvinoenderana nezera asi kazhinji zviri kumashure kweshure kwemwenje.